ဆရာအောင်ကောင်းမွန်၏ တားရော့ ဗေဒ လက္ခဏာ
ကျွန်တော်နှင့် တားရော့ သင်ခန်းစာ---အောင်ကောင်းမွန်(လားရှိုး)
ကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဗေဒင်လက္ခဏာပညာ၇ပ်တွေကိုယ်အလွန်ကိုဘဲဝါသနာကြီးခဲ့သူပါ။ လူရယ်လို့ကောင်းစွာသိလို့စာဖတ်တတ်စအ၇ွယ်ကတည်းကဗေဒင်စာအုပ်တွေတွေ့ ၇င်ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ဖတ်မှတ်ခဲ့တယောက်ပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချို့သူငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော့ ကိုကိုင်၇ို၇ူးလို့ခေါ်ဝေါ်သလိုတချို့သူများမှာတော့ဗေဒင် ၇ူးဆိုပြီစသလိုလိုအတည်လိုလိုနဲခေါ်ဝေါ်နောက်ပြောင်ခံခဲ့၇သူတယောက်ပါ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘ၀ဆိုတဲ့ကောင်းဆိုးနှစ်ထွေေ၇ာမွှန်းလှတဲ့ကျွန်တော့ ဘ၀ခ၇ီးသည်ဟာသက္က၇ဇ်၂၀၀၃ကိုေ၇ာက်တော့
ကုမ္ပဏီရှယ်ယာဝင်ဦးရေနှင့် အမည်၊ရာထူး၊အုပ်ချုပ်မှုပိုင်း၏ ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲများ၏ အမည်နှင့်မွေးသက္ကရာဇ်နှင့် မွေးနေ့နံများ-
Kungmong@gmail. com ကို မေးပို့လိုက်ပါနော်။
မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်သူများမှာ ပညာဉာဏ်ပူဇော်ခကို မိမိတို့နေထိုင်သည်မြို့များမှနေ၍ကမ္ဘောဇဘဏ် (KBZ Bank)မှ ဖြစ်စေ၊KBZ Account nunber 0081210078768 (Name of Account) UWai Lin Oo (KHA)U Aung Kaung Mon
မိမိတို့နေထိုင်သည့်မြို့များမှ AYA Bank (ဧရာဝတီ ဘဏ်) သို့ဖြစ်စေ ပညာဥာဏ်ပူဇော်ခလွှဲပို့နိုင်ပါသည်။
AYA Account Nunber 0027201011047068
AYA MPU Account Nunber 0027201011047068
AYA i Banking ဖြင့်လည်း အထက်ပါ Account Nunber 0027201011047068
အထက်ဖော်ပြပါဘဏ်အကောင့်သို့ပညာဥာဏ်ပူဇော်ခငွေပေးသွင်းပြီးလျှင် ဖုန်း--09 445107265 သို့ဆက်သွယ်ပေးစေလိုပါသည်။
လုပ်ကိုင်မည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစား -
အထက်ဖော်ပြပါဘဏ်အကောင့်သို့ပညာဥာဏ်ပူဇော်ခငွေပေးသွင်းပြီးလျှင် ဖုန်း--09 445107265 သို့ဆက်သွယ်ပေးစေလို…
ခင်မင်လေးစားရပါသော Myanmar Online မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့
ခုနှစ်ရက်သားသမီးတို့၏ကံဇာတာကို တစ်နှစ်စာ၊ ခုနှစ်နှစ်စာ ဟောစာတန်းများကို
မြန်မာဗေဒ၀ိဇ္ဇာကြီး ဖြစ်သူ ကျွန်တော်၏မဟာကျေးဇူးရှင် ဆရာသခင် အဘဒေါက်တာမင်းသိင်္ခ၏
(A4) စာမျက်နှာများဖြင့် ဖြစ်စေသင့်ရဲ့E:mail မှဖြစ်စေ အလွယ်တကူ ပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် Online မှ ဟောပြောပေးပို့နေ ပါပြီ။
(၁)နှစ်စာ ၊ (၇)နှစ်စာ ဟောစာတန်းများ မှာယူရန်အတွက် ဗေဒင်မေးလိုသူ ဇာတာရှင်၏ မွေးသက္ကရာဇ် အပြည့်အစုံနှင့် မွေးဖွားရာဒေသ၊ မြို့၊ ပြည်နယ်/တိုင်း၊ နိုင်ငံ - များကိုကျွန်တော့ထံ E:mail မှပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျား / မ -
အိမ်ထောင်ဖက်မွေးသက္ကရာဇ်နှင့် နေ့သား/သမီး -
လက်ရှိအချိန်တွင်နေထိုင်သော ၊ ပြည်နယ်/တိုင်း/နိုင်ငံ
လက်ရှိကာလတွင် အထူးသိလို၍ မေးလိုသောကိစ္စရပ်များ
ကလေး၏ မွေးသက္ကရာဇ် အတိအကျ....
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 09-445107265 သို့ဖြစ်စေ၊ 09 260806179သို့ဖြစ်စေ
Email ဖြင့်လည်း - Kungmong@gmail. com သို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပညာဉာဏ်ပူဇော်ခမှာ- ကလေးအမည်ပေးစာစု မြန်မာငွေဖြင့်- (၁၁၀၀၀/ိ-) ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်သူများမှာ ပညာဉာဏ်ပူဇော်ခကို မိမိတို့နေထိုင်သည်မြို့များမှနေ၍ကမ္ဘောဇဘဏ် (KBZ Bank)မှ ဖြစ်စေ၊KBZ Account nunber 0081210078768 (Name of Account) UWai Lin Oo (KHA)U Aung Kaung Mon
AYA MPU Account Nunber 0027…
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်ထံသို့ ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီး ကိုပီတာဆိုသူ ရောက်ရှိလာလေ၏။ ၎င်းကိုပီတာကြီးသည် စိတ်ကောင်းကောင်းမနှံ့ရှာပေ၊ သို့သော် ခင်မင်ဖွင်ရာကောင်း၏။ ကျွန်ုပ်ကို တွေ့လျှင်တွေ့ချင်း ၎င်းက ၎င်း၏ ထုံးစံအတိုင်း .. “ဟေ့.. ဖိုးအောင်ထွန်း၊ ဂွတ်ဒ်မောနင်း၊ ဂွတ်ဒ်နိုက်” ဟု နှုတ်ဆက်လေ၏။
ကျွန်ုပ်က ၎င်းအား . “ ကိုပီတာကြီးတစ်ယောက် မလာတာ အတော်ကြာပြီနော်” ဟု ပြောလိုက်ရာ ၎င်းက..“ဟုတ်ပါတယ်ကွာ၊ မင်းကို ငါသတိရနေလို့ မလာဖြစ်တာကွ” ဟု ကိုပီတာကြီးက
ကျွန်တော်နှင့် တားရော့ သင်ခန်းစာ---အောင်ကောင်းမွန်...
ဆရာအောင်ကောင်းမွန် တားရော့ ဗေဒ လက္ခဏာ